I-china Quality Webbing, Inkinobho, i-Plastic Bag Quatation nabahlinzeki - i-Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Le nkampani yethule amasethi angaphezu kuka-100 amathuluzi endwangu athuthukile.
Sinikeza ukusebenza kahle okuphezulu nesisombululo esiguquguqukayo samakhasimende emigqa ehlukene evela emhlabeni wonke Futhi uzwe.
U-Angel uzibophezele ekuvunuleni izesekeli ezitolo eziningi kanye nazo zonke izinhlobo zezesekeli design, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuthengiswa.
Imikhiqizo ithengiswa kakhulu eYurophu nasemakethe yaseMelika nasezimbonini zezingubo zokuhweba zangaphandle, manje inzuzo engena nyangazonke ingafinyelela ezigidini ezi-3.
Inkinobho ye-Crystal pear
Isikhwama sepulasitiki se-PE
Izesekeli ze-Angel Garment Co., Ltd.
I-Angel Garment Accessories Co, Ltd. ingumkhiqizo wobuchwepheshe wokukhilosha, imikhakha emibili engenamikhono; I-Flexible, iribhoni engenayo, nezinhlobo ezingaba yinkulungwane zemikhiqizo yezesekeli yamabhizinisi amabhizinisi asezingeni eliphakeme. Uzibophezele kuzesekeli zezingubo ezidayisa yonke impahla nazo zonke izinhlobo zokuklanywa kwezesekeli, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuthengiswa. Inkampani yethu ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende, njengokufaka umbala, imikhiqizo ye-ribbon enokumelana nokukhanya, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana namanzi, ukugqoka ukumelana, kungapheli nezinye izici, imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ezingutsheni, ezicathulweni, izigqoko, izikhwama, amathoyizi, izimoto, imisebenzi yezandla, imishini yezokwelapha nezinye izimboni njengezinto ezisizayo. Inkampani yethu yasungulwa ngo-2010, itholakala emhlabeni idolobha yokukhiqiza edumile - Dongguan. Ngemizamo ehlanganyelwe yawo wonke amalungu enkampani yethu, i-Angel Garment Accessories isibe ngomunye wabahlinzeki bezingubo ezinhle kakhulu ekhaya nakwamanye amazwe.
Kungani kufanele ilebula elilukiwe lentambo yomgunyathi lishintshwe?
Amanye amakhasimende acabanga ukuthi kukhona nezikhiye ezungeze amamaki alukiwe. Eqinisweni, lokhu ukuqonda okungalungile.Ilebuli elukiwe lihlangene, okuyinqubo yokwengeza elandelayo.Hemming iyindlela yokuthunga esetshenziselwa ukuluka onqenqemeni noma inkinobho yezinhlamvu zelebula.
Uyini isingeniso senqubo ye-jacquard ribbon jacquard ribbon
I-Jacquard ngemuva kokuvela kwe-ribbon enezinhlangothi ezintathu, i-jacquard pattern ukuqina okuqinile, i-deformation.Brand jacquard, ilogo ebonakalayo ngokusobala, umbala okhanyayo, ibanga kakhulu, ayikwazi ukukhulisa kuphela inani elengeziwe lemikhiqizo, Ingaphinde ithuthukise isithombe somkhiqizo...
Ungahlukanisa kanjani ikhwalithi yokufaka izingodo?
Kunezinhlobo eziningi ze-webbing embonini ye-webbing, esetshenziswa kakhulu emikhakheni ehlukahlukene yezimboni ezifana nezembatho, ukuphrinta uphawu lwentengiso, izinto zezicathulo, imithwalo, imboni, ezolimo, izimpahla zempi, nezokuthutha.
Inqubo yokudaya yezingubo zezingubo zokugqoka
Nazi izindlela ezimbili eziyinhloko zokufaka imibala kumaribhoni wezindwangu. Enye yazo ukudaya okusetshenziswa kakhulu (ukudaya okuvamile), ikakhulu okwelapha amaribhoni wezindwangu kusisombululo sedayi lamakhemikhali. Enye indlela ukusebenzisa upende, owenziwa ube yizinhlayiya ezincane ezinemibala...